Android ဖုန်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ run နေတဲ့ App တွေကို ဖြေရှင်းနည်း - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းလမ်းများ > Android ဖုန်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ run နေတဲ့ App တွေကို ဖြေရှင်းနည်း
Android ဖုန်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ run နေတဲ့ App တွေကို ဖြေရှင်းနည်း
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 11:32 AM Android Tutorial, နည်းလမ်းများ
Android ဖုန်းတွေမှာ အချို့ App တွေက သုံးပြီး ပိတ်လိုက်ရင်တောင်မှ OS ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ပွင့်နေတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပွင့်နေ run နေတဲ့ App တွေ များလာရင်တော့ ဖုန်းက ဘက်ထရီ ခဏလေးနဲ့ ကုန်မှာဖြစ်သလို ဖုန်းရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေလည်း နှေးကွေးလေးလံ လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီ ခဏခဏကုန်လာတယ်။ သုံးရတာလည်း အရင်လောက် မမြန်တော့ဘူး ဆိုရင်တော့ နောက်ကွယ်မှာ App တွေ run နေလားဆိုတာကို စစ်ဆေးပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းကနေ App တွေကို Back ခလုတ်နှိပ်ပြီး ထွက်လိုက်ရုံနဲ့ OS ရဲ့ နောက် ကွယ်မှာ run မနေအောင် လုပ်ထားလိုက်ရုံပါပဲ။
အရင်ဆုံးဖုန်း OS ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ App တွေ run နေလား ဆိုတာကို စမ်းသပ်ဖို့အတွက် Recent Key ဒါမှမဟုတ် Home Key ကို အသုံးပြုပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Recent App တွေကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ ဖုန်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး ကြည့်ရှုပုံ ကွဲပြားမှာပါ။
အဲ့ဒီလိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ ပုံထဲကအတိုင်း ဖုန်း OS ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ run နေတဲ့ App တွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
App တွေကို အသုံးပြု ပြီးတိုင်း Back ခလုတ်နှိပ်ပြီး ပိတ်လိုက်တာတောင်မှ OS နောက်ကွယ်မှာ App တွေ များစွာ ပွင့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အခြား Third party App သုံးစရာမလိုဘဲ ခုဖော်ပြတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ အလွယ်တကူ ပိတ်နိုင်ပါတယ်။ အရင်ဆုံးဖုန်းရဲ့ Settings ထဲကို ၀င်ဖို့အတွက် Settings icon ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Android ဖုနျးတှမှော အခြို့ App တှကေ သုံးပွီး ပိတျလိုကျရငျတောငျမှ OS ရဲ့ နောကျကှယျမှာ ပှငျ့နတေတျပါတယျ။ အဲ့ဒီလိုပှငျ့နေ run နတေဲ့ App တှေ မြားလာရငျတော့ ဖုနျးက ဘကျထရီ ခဏလေးနဲ့ ကုနျမှာဖွဈသလို ဖုနျးရဲ့ လုပျဆောငျမှုတှလေညျး နှေးကှေးလေးလံ လာမှာဖွဈပါတယျ။ ဘကျထရီ ခဏခဏကုနျလာတယျ။ သုံးရတာလညျး အရငျလောကျ မမွနျတော့ဘူး ဆိုရငျတော့ နောကျကှယျမှာ App တှေ run နလေားဆိုတာကို စဈဆေးပါ။ ပွီးရငျ ဖုနျးကနေ App တှကေို Back ခလုတျနှိပျပွီး ထှကျလိုကျရုံနဲ့ OS ရဲ့ နောကျ ကှယျမှာ run မနအေောငျ လုပျထားလိုကျရုံပါပဲ။
အရငျဆုံးဖုနျး OS ရဲ့ နောကျကှယျမှာ App တှေ run နလေား ဆိုတာကို စမျးသပျဖို့အတှကျ Recent Key ဒါမှမဟုတျ Home Key ကို အသုံးပွုပွီး ကွညျ့နိုငျပါတယျ။ Recent App တှကေို ကွညျ့တဲ့အခါမှာ ဖုနျးအမြိုးအစားပျေါ မူတညျပွီး ကွညျ့ရှုပုံ ကှဲပွားမှာပါ။
အဲ့ဒီလိုနှိပျလိုကျရငျတော့ ပုံထဲကအတိုငျး ဖုနျး OS ရဲ့ နောကျကှယျမှာ run နတေဲ့ App တှကေို တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။
App တှကေို အသုံးပွု ပွီးတိုငျး Back ခလုတျနှိပျပွီး ပိတျလိုကျတာတောငျမှ OS နောကျကှယျမှာ App တှေ မြားစှာ ပှငျ့နတေယျဆိုရငျတော့ အခွား Third party App သုံးစရာမလိုဘဲ ခုဖျောပွတဲ့ နညျးလမျးနဲ့ အလှယျတကူ ပိတျနိုငျပါတယျ။ အရငျဆုံးဖုနျးရဲ့ Settings ထဲကို ဝငျဖို့အတှကျ Settings icon ကို နှိပျလိုကျပါ။
Settings စနစ်ပွင့်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Settings ထဲက Developer Options ကို ဖွင့်ပေးဖို့အတွက် ဖုန်းရဲ့ Settings ထဲကနေ အောက်ဆုံးနားကို ပွတ်ဆွဲပြီး About Phone ကိုရှာပြီး နှိပ်ပါ။
About Phone ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ ဖုန်းရဲ့ System info စနစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီထဲက မှ Build number ဆိုတဲ့စာသား အကွက်ကို သုံးကြိမ်တိတိ ဆက်တိုက်နှိပ်လိုက်ပါ။ (Build number ကို မတွေ့ရင်တော့ Software Version ဆိုတဲ့စာသား ကိုရှာပြီး နှိပ်ပါ။
အဲလိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ မြင်ကွင်းမှာ You are nowadeveloper! ဆိုတဲ့ စာသားပေါ် လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုပေါ်လာ ရင်တော့ Developer Options ကို ဖွင့်လိုက်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ About phone ကနေ ပြန်ထွက်ဖို့အတွက် Back ခလုတ်ကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ ဖုန်းရဲ့ System စနစ်ထဲမှာ Developer options ဆိုတာ ပေါ် လာမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီ Developer options စာသားကို တစ်ချက်နှိပ် လိုက်ပါ။
Developer Options ထဲကို ရောက်ရင်တော့ Developer Options ဆိုတဲ့စာသားဘေးနား က ခလုတ်လေးက ပွင့်နေတဲ့ပုံစံ ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် တော့ APPS ဆိုတဲ့ အပိုင်းက Don’t keep activities ဆိုတဲ့ စာသားကို ရှာပြီး ဘေးနားက ခလုတ်ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဒါမှမဟုတ် အကွက်လေးကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီး Enable လုပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ သူ့အောက်က Background process limit ဆိုတဲ့ စာသားကို တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပါ။
Background process limit ဆိုတဲ့ အကွက်လေး တစ်ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီထဲကမှ No background processes ဆိုတဲ့ စာသားဘေးနားက အကွက်လေးကို ရွေးထားပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ်က App တွေကို သုံးပြီးတိုင်း back ခလုတ်နှိပ်ပြီး ထွက်လိုက်ရုံနဲ့ OS ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ App တွေ run နေတာမျိုး ပွင့်နေတာမျိုးတွေ ဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဖုန်းက သုံးလာတာကြာလို့ ဘက်ထရီ ခဏခဏ ကုန်တာမျိုးနဲ့ ဖုန်းရဲ့ OS စနစ်ပိုင်း လေးလံနှေးကွေးနေ တယ်ဆိုရင်လည်း ဖုန်းရဲ့ ဘက်ထရီပါဝါနဲ့ CPU သုံးစွဲမှုတွေကို တခြား Third Party App တွေ သုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ ခုလိုမျိုး အလွယ်တကူ လျော့ချထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Settings စနဈပှငျ့လာမှာ ဖွဈပါတယျ။
Settings ထဲက Developer Options ကို ဖှငျ့ပေးဖို့အတှကျ ဖုနျးရဲ့ Settings ထဲကနေ အောကျဆုံးနားကို ပှတျဆှဲပွီး About Phone ကိုရှာပွီး နှိပျပါ။
About Phone ကိုနှိပျလိုကျရငျတော့ ဖုနျးရဲ့ System info စနဈပျေါလာမှာဖွဈပွီး အဲဒီထဲက မှ Build number ဆိုတဲ့စာသား အကှကျကို သုံးကွိမျတိတိ ဆကျတိုကျနှိပျလိုကျပါ။ (Build number ကို မတှရေ့ငျတော့ Software Version ဆိုတဲ့စာသား ကိုရှာပွီး နှိပျပါ။
အဲလိုနှိပျလိုကျရငျတော့ မွငျကှငျးမှာ You are nowadeveloper! ဆိုတဲ့ စာသားပျေါ လာမှာဖွဈပါတယျ။ အဲလိုပျေါလာ ရငျတော့ Developer Options ကို ဖှငျ့လိုကျပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပွီးရငျတော့ About phone ကနေ ပွနျထှကျဖို့အတှကျ Back ခလုတျကို တဈခကျြနှိပျလိုကျပါ။ ဖုနျးရဲ့ System စနဈထဲမှာ Developer options ဆိုတာ ပျေါ လာမှာဖွဈပွီး အဲဒီ Developer options စာသားကို တဈခကျြနှိပျ လိုကျပါ။
Developer Options ထဲကို ရောကျရငျတော့ Developer Options ဆိုတဲ့စာသားဘေးနား က ခလုတျလေးက ပှငျ့နတေဲ့ပုံစံ ဖွဈနမှောဖွဈပါတယျ။ ပွီးရငျ တော့ APPS ဆိုတဲ့ အပိုငျးက Don’t keep activities ဆိုတဲ့ စာသားကို ရှာပွီး ဘေးနားက ခလုတျကို တဈခကျြနှိပျပွီး ဒါမှမဟုတျ အကှကျလေးကို အမှနျခွဈပေးပွီး Enable လုပျလိုကျပါ။
ပွီးရငျတော့ သူ့အောကျက Background process limit ဆိုတဲ့ စာသားကို တဈခကျြထပျနှိပျပါ။
Background process limit ဆိုတဲ့ အကှကျလေး တဈခုပျေါလာမှာဖွဈပွီး အဲဒီထဲကမှ No background processes ဆိုတဲ့ စာသားဘေးနားက အကှကျလေးကို ရှေးထားပေးလိုကျပါ။
ဒါဆိုရငျတော့ ကိုယျက App တှကေို သုံးပွီးတိုငျး back ခလုတျနှိပျပွီး ထှကျလိုကျရုံနဲ့ OS ရဲ့ နောကျကှယျမှာ App တှေ run နတောမြိုး ပှငျ့နတောမြိုးတှေ ဖွဈတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ ကိုယျ့ဖုနျးက သုံးလာတာကွာလို့ ဘကျထရီ ခဏခဏ ကုနျတာမြိုးနဲ့ ဖုနျးရဲ့ OS စနဈပိုငျး လေးလံနှေးကှေးနေ တယျဆိုရငျလညျး ဖုနျးရဲ့ ဘကျထရီပါဝါနဲ့ CPU သုံးစှဲမှုတှကေို တခွား Third Party App တှေ သုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ ခုလိုမြိုး အလှယျတကူ လြော့ခထြားနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
Android ဖုန်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ run နေတဲ့ App တွေကို ဖြေရှင်းနည်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 11:32 AM Rating:5Android ဖုန်းတွေမှာ အချို့ App တွေက သုံးပြီး ပိတ်လိုက်ရင်တောင်မှ OS ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ပွင့်နေတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပွင့်နေ run နေတဲ့ App တေ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 11:32 AM